एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्री देउबाले प्रश्न गरे- डाक्टरहरूले के गर्न खोजेका हुन ? – Everest Dainik – News from Nepal
एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्री देउबाले प्रश्न गरे- डाक्टरहरूले के गर्न खोजेका हुन ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्कनु भएको छ । राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन असोज ३ गते अमेरिका जानु भएका प्रधानमन्त्री देउवा दुबई र ओमान हुँदै स्वदेश फर्कनु भएको हो ।
त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमण बारे जानकारी दिनुभयो । सञ्चारकर्मीसंग उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा लगायत ओमान भ्रमण फलदायी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
चिकित्सकहरूका मागप्रति सकारात्मक रहेकाे भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘क्याविनेटको निर्णय उहाँहरूको खिलाफमा भएको जस्तो मलार्इ लाग्दैन । डाक्टरहरूलार्इ दुःख दिने नियत हुनै सक्दैन । उहाँहरूका जेन्यून माग गर्न हामी तयार छाैं ।’
देउवाले चिकित्सकका मागबारे आफू सचेत रहेको बताउनु भयो । उनले आगामी दिनमा चिकित्सकका समस्या समाधान गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णय चिकित्सकको हकहित विरुद्ध नभएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो । ‘खासगरी उहाँहरूले हड्ताल गरिदिनु भएन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘डाक्टरहरूको सुरक्षा गर्न हामी तयार छाैं ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयनमा नेपाल अन्तिम चरणमा पुगेको तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको अन्र्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको ओमान भ्रमणले आपसी सम्बन्धमा नया आयाम थपेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्न उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छदार, शिक्षा मन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्र देव लगायतको उपस्थिति थियो ।